Jabuuti oo xirtay xudduudaheeda kaddib markii uu “ku soo labo kacleeyay coronavirus” | Dusta News
Home > General > Jabuuti oo xirtay xudduudaheeda kaddib markii uu “ku soo labo kacleeyay coronavirus”
October 21, 2020 October 21, 2020 Dusta News127Leave a Comment on Jabuuti oo xirtay xudduudaheeda kaddib markii uu “ku soo labo kacleeyay coronavirus”
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale xirtay xudduudaheeda kaddib markii uunsoo laba kacleeyey fayraska Karoona oo maalmihii la soo dhafay kiisas badan laga diiwaan geliyey dalkaasi.
War ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jabuuti ayaa lagu sheegay in xadduudaha dhanka dhulka la xirayo muddo 15 maalmood ah, si loo xakameeyo faafitaanka fayraska.
Jabuuti waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee uu sida ba`an ugu faafay fayraska Karoona, hase yeeshee dadaal ay dowladdu sameysay ayaa lagu sheegay inay yaraadeen kiisaska, muddooyinkii ugu dambeeyay.
Bilihii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ayaa ka dabar go`ay dalkaas, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka. Warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda ayaa lagu sheegay inaysan jirin kiisas cusub, isla markaana dhammaan dadka uu ku dhacay ay ka bogsadeen.
Balse shalay oo keliya ayay wasaaraddu shaacisay 30 kiis oo fayraska ah, balse faahfaahin kama bixin halka ay kiisaskaasi ka yimaadeen.
Waxaa jira dad u dhashay Jabuuti oo ku maqan dalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu Dhawaaqday ee Somaliland, kuwaas oo inta badan safar dhulka ay ku soo gala Jabuuti amaba kaga baxa, lama oga in lagu amri doono inay diyaarad soo raacaan iyo inkale.
Dowlada ayaa ugu baaqday shacabka inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah, si loo xakameeyo cudurka.
Qaramada Midoobey iyo DFS oo ku baaqay in la badbaadiyo Shaqaalaha Samafalka
Al-Shabaab oo goor dhaw weerar is-miidaamin ah ku qaaday Bacaadweyn